« Time2dance » : tsy nitsanga-menatra i Julie Iarisoa | NewsMada
« Time2dance » : tsy nitsanga-menatra i Julie Iarisoa
Tontosa, ny 18 hatramin’ny 23 septambra teo, tany Tanzania, ny « Time2dance » andiany fahadimy, karakarain’ny Muda Africa dance, sekoly iray mampianatra dihy, any Dar es Salaam. « Festival » fanao isan-taona, miompana amin’ny dihy ankehitriny izy ity ary anasana matihanina eo amin’izany sehatra izany.
Hatramin’ny nisian’ny hetsika, notsongain’ny mpikarakara hizara ny traikefany sy haneho ny talentany hatrany i Julie Iarisoa, mpanao soradihy tsy zovina intsony. Azo lazaina ho tsy nitsanga-menatra ity solontena malagasy ity, araka ny nambarany.
«Vita soa aman-tsara ny fandraisako anjara tamin’ny « Festival Time2dance ». Nanao fampisehoana roa ny tenako. Ny voalohany, soradihy « solo », mitondra ny lohateny hoe « Strangeness ». Nisy koa ny soradihy vaovao, niarahako tamin’ny mpandihy tanzanianina miisa enina, avy amin’ny sekoly Muda Africa dance school. « 21st century », kosa ny lohatenin’io », hoy i Julie Iarisoa. Nambarany fa tsara ny fandraisan’ny mpijery sy ny mpikarakara ny asam-pamoronana natao ary mbola hisy tohiny ny fiaraha-miasa amin’ny taona ho avy.
Ho an’ny eto an-toerana indray, manomana ny fidiran’ny taom-pianarana vaovao i Julie Iarisoa. Ao anatin’izany ny fanohizana ilay tetikasany “Dihy ho an’ny rehetra”.